Manjaro ine chipfuwo chitsva, robotic penguin | Linux Vakapindwa muropa
Musi waGunyana 30, iyo yepamutemo Manjaro Twitter account yakaburitsa tweet mairi yakanzi «Iti hesi kune yako yazvino yekuwedzera kune yedu timu yeManjaro!»Inoperekedzwa nemufananidzo wauinayo pamusoro pemitsara. Ndakazviona, ndikatobvunza muboka renharaunda kana yaive mascot yepamutemo, asi pandakatambira nyadzi "hongu" pasina rumwe ruzivo, ndakafunga kumirira dzimwe nhau. Dare repamutemo harina kutaura chero chinhu nezvazvo zvakare, asi isu takatarisana ne manjaro mascot.
Uye ndingave sei nechokwadi kana vasina kutaura chimwe chinhu kubva pazuva rekupedzisira raGunyana? Zvakanaka, nei Manjaro batanidza kuchitoro pawebhusaiti yavo apo patinogona kutenga zvigadzirwa zvemhando, uye ipapo zvakanyatsotsanangurwa: «Manjaro mascot». Nemufananidzo wako tinogona kutenga mashati, makepisi, makombi, zvitambi uye nezve zvese zvataigona kutotenga nemamwe madhirowa ane chekuita neakakurumbira Arch Linux-yakavakirwa kugovera.
Chii chinonzi Manjaro pet?
Ini ndoziva, kana kufunga, kuti ivo vakavakirwa pane chimwe chinhu icho zvino chisingauye mupfungwa, asi zvakare chinotaridzika saEva kubva muvhi Wall-E. Zvakafanana nerobhoti iyo yatinofungidzira nhunzi saEva, nekuti haina makumbo, ine green M pachipfuva chayo uye ine muromo nemavara anoyeuchidza zvakanyanya Penguinndokuti, kumascot yeLinux, Tux.
Ndine chokwadi chekuti vachakurumidza kutiudza izvo robhoti diki iyi inonzi, asi izvozvi haina zita (kana ini handina kuiwana). Mascot eKDE anonzi Konqui, kutanga neiyo imwechete K iyo yavanoshandisa mune ese marudzi esoftware yavo. Kana chipfuwo ichi chikatumidzwa zita, chinofanira kusanganisira chikamu che "Manjaro" muzita racho? "Manjux" angave sei? Parizvino ivo vanongomuti "chipfuwo," uye ndinoda mufananidzo wake.
Nezve iyo inoshanda system, yazvino vhezheni yakagadzikana yakavhurwa Svondo 24.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Isu tinopa kwamuri Manjaro's mascot nyowani, robotic penguin iyo parizvino isina zita